भारतको एउटा मुख्य कमी जसकारण चीनसँग यु*द्ध गर्न डराइरहेको छ ! – Butwal Sandesh
भारतको एउटा मुख्य कमी जसकारण चीनसँग यु*द्ध गर्न डराइरहेको छ !
भारत र चीनबीच लद्दाखमा चलिरहेको सीमावि*वाद हिं*स्रक भि*डन्तमा परिणत भएपछि यु*द्ध चर्किने आशं*का गरिएको छ तर परिस्थितिलाई मत्थर पार्न वार्ता पनि भइरहेका छन् । दुई देशबीच सैन्य स्तरमा वार्ता चलिरहेको छ भने रुसले समेत यी दुई देशबीच कुराकानीका लागि पहल गरिरहेको छ । त्यसो त भारतसँग वार्ता गर्नुको विकल्प छैन किनकि भारतीय सैन्यबल र हा*तह*तियार चीनको तुलनामा निकै कमजोर छ । गलवानमा भएको भि*डन्तमा भारतका २० सैनिक मा*रिए । चीनतर्फ भने कुनै ह*ताहती नभएको र पाँचजना सैनिक घा*इते भएको बताइएको छ यद्यपि त्यो आधिकारिक विवरण चाहिँ हैन ।
त्यसो त यी दुई देशबीच भएका सीमासम्बन्धी विभिन्न सम्झौताअनुसार वास्तविक नियन्त्रण रेखाको दुई किलोमिटर क्षेत्रमा गोली चलाउन निषेध गरिएको छ । त्यसैले लद्दाख भि*डन्तमा चिनियाँहरूले कीला खोपिएको मुंग्रो र काँ*डेतार बेरिएको लट्ठी लगायतका घरेलु ह*तियार उपयोग गरेर भारतीय सैनिकहरूलाई मा*रेको पाइयो ।
अनि घा*इते भएका भारतीय सैनिकहरूलाई समयमा उद्धार गर्न नसकिएका कारण चिसोले कठ्यांग्रिएर मृ*त्यु भएको थियो । अर्थात्, उच्च हिमाली क्षेत्रको विषम परिस्थितिमा लड्न भारतीय सैनिकहरू तयार नरहेको पाइयो । हुन त त्यसभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको सियाचेन ग्लासियरमा भारतीय सैनिकहरू खटिएका छन् तर त्यहाँ यु*द्धको अनुभव हासिल गर्न पाएका छैनन् । त्यसो त कठ्यांग्रिदो वातावरणका कारण सियाचेन सन् १९८४ र २०१५ का बीचमा ८६९ जना भारतीय सैनिकले ज्या*न गुमाएको भारतको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले भि*डन्त भएको स्थानबाट भागेर बाटो बिराएका १० जना भारतीय सैनिकहरूलाई चिनियाँहरूले नै उद्धार गरेर भारतीय शिविरसम्म पुर्‍याएको खबर पनि आएको छ । यस्ता किसिमका कार्यले तनाव मत्थर पार्नमा योगदान गर्छन् अनि दुवै देशका शीर्ष नेताहरूले वार्तामै जोड दिइरहेका पनि छन् । त्यसैले यु*द्ध नचर्कने आशा गर्न सकिन्छ । तर भविष्यमा यी दुई देशबीच यु*द्ध हुनसक्ने सम्भावनालाई खारेज गर्न मिल्दैन । यी दुवै आ*णविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र हुन् ।
भारतसँग १५० वटा वारहेड छन् । वारहेड भनेको वि*स्फोटक पदार्थ अर्थात् आ*णविक ब*म हो जसलाई क्षेप्यास्त्र वा रकेटमार्फत श*त्रुको भूमिमा वि*स्फोट गराइन्छ । चीनसँग चाहिँ यस्ता वारहेड ३२० वटा छन् अर्थात् भारतको भन्दा दोब्बर बढी छ । फेरि चीनका वारहेडहरू श*त्रुदेशका प्रमुख शहरमा अत्यधिक क्षति हुने गरी वि*स्फोट गराउने क्षमता राख्छन् । त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण तथ्य चाहिँ चीनलाई भारतका कुन–कुन सैन्यअड्डामा आणविक ह*तियार राखिएको छ भन्ने थाहा छ । त्यसैले भारतले क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्नुअघि नै चीनले ती अड्डामाथि आ*क्रमण गरिदिन सक्छ । सैन्य भाषामा यसलाई प्रिएम्पटिभ फर्स्ट स्ट्राइक भनिन्छ ।
भारतका वारहेडहरू प्र*हार गरिएर आकाशमा पुगे भने पनि चीनको एयर डिफेन्सले तिनलाई बीच बाटोमै आकाशबाट खसाइदिन सक्छ, अर्थात् चीनको क्षे*प्यास्त्र प्रतिरोध प्रणाली पनि चुस्त छ । भारतले आफ्नो यही कमजोरीलाई अनुभव गरेर रुससँग सन् २०१८ मा एस४०० नामक क्षे*प्यास्त्रप्रतिरोधी प्रणाली किन्नका लागि सम्झौता गरेको छ । यस प्रणाली जडान गरिएको ठाउँबाट ४०० किलोमिटरको दूरीसम्म आएका जुनसुकै क्षे*प्यास्त्रलाई पनि आकाशमै वि*स्फोट गरेर खसाउन सकिन्छ ।
तर यो प्रणाली एकैपटक सांगोपांग डेलिभर गर्न मिल्दैन र पाँच किस्तामा गरी सबै पाटपुर्जा डेलिभर हुन सन् २०२५ सम्म लाग्छ । त्यस अवधिसम्म भारतले आफैं क्षे*प्यास्त्र प्रहार गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन किनकि शत्रुदेशबाट जवाफी कारवाहीमा प्र*हार हुने क्षे*प्यास्त्रबाट ऊ सुरक्षित रहँदैन । त्यसो त भारतबाट हुन सक्ने आ*क्रमणको आकलन गर्दै चीनले पनि एस४०० क्षेप्या*स्त्र प्रतिरोध प्रणाली रुससँग किनिसकेको छ ।
अमेरिकाले शुरू गरेको मिसाइल टेक्नोलोजी कन्ट्रोल रेजिम भन्ने समूहमा रहेका मुलुकहरूले मात्र एकअर्कालाई एस४०० प्रणाली बेच्न पाउने बाध्यता छ । चीन उक्त समूहको सदस्य हैन तैपनि उसले रुससँग त्यसको खरिद गरिसकेको छ । अर्थात्, उसलाई एस४०० को नालीबेली सबै थाहा छ । ह*तियारविद्हरूका अनुसार, एस४०० लाई झुक्याउन सकिन्छ र यो अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा राखेको थाड प्रणाली जस्तो भरपर्दो पनि छैन । त्यसैले एस ४०० किने पनि भारतलाई त्यसले खासै फाइदा दिने संकेत पाइँदैन ।
अनि यु*द्धमा प्रतिरक्षा बलियो मात्र भएर पुग्दैन, आ*क्रमण त्यसभन्दा बलियो हुनुपर्छ । ह*तियार प्रक्षेपणको सवालमा चीनसँग भारतको भन्दा बढी विकल्प छन् । उसका ब*मवर्षक विमान र पनडुब्बीहरू भारतको भन्दा बढी संख्यामा र अत्याधुनिक छन् । चीनसँग ७५ वटा अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू सिलोमा छन् । सिलो भन्नाले सिलिन्डरको आकारमा रहेको भूमिगत संरचना हो जसमा अन्तरमहादेशीय क्षे*प्यास्त्र राखिएका हुन्छन् ।
चीनले दुई महिनाअघि इन्नर मंगोलियामा राखिएका यी क्षे*प्यास्त्रहरूको तस्वीर चुहाएको थियो र पछि तिनलाई लुकाएको थियो । भारत र अमेरिकालाई तर्साउनका लागि उसले त्यसो गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । चीनसँग रहेको डीएफ–४१ नामक अन्तरमहादेशीय क्षे*प्यास्त्रको दायरा १२ हजारदेखि १५ हजार किलोमिटर छ । चिनियाँ भूमिबाट प्रहार गरेको उक्त क्षे*प्यास्त्र अमेरिकासम्म पनि पुग्न सक्छ ।
त्यसमा १० वटा बेग्लाबेग्लै आ*णविक वारहेडहरू राख्न मिल्छ । त्यसले पुर्‍याउने क्षति अकल्पनीय हुन्छ । त्यसो त भारतसँग ६० वटा अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र छन् । उससँग चिनियाँ मुख्यभूमिमा पुग्न सक्ने अन्तरमहादेशीय क्षे*प्यास्त्र अग्नि–४ र अग्नि–५ पनि छन् । उसले दुई वर्षअघि परीक्षण गरेको अग्नि–५ को दायरा पाँच हजार किलोमिटर छ र त्यसमा एक टनभन्दा भारी एउटा आ*णविक वारहेड राख्न मिल्छ । त्यससँग चीनको मुख्यभूमिसम्म पुग्ने क्षमता भए पनि चीनको मिसाइल इन्टरसेप्सन प्रणालीले त्यसलाई आकाशमै वि*स्फोट गराइदिन सक्छ । यसरी हेर्दा चीनसँग भारतको कुनै पनि भागमा क्षे*प्यास्त्र प्र*हार गर्न सक्ने क्षमता छ अनि भारतसँग प्रभावकारी क्षेप्या*स्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली छैन ।
भारतलाई अर्को अप्ठ्यारो भनेको चीनको सर्वकालीन मित्र पाकिस्तानसँग पनि आ*णविक ह*तियार छ । यस कमजोरीका कारण भारतले आफ्नो क्षेप्या*स्त्र राखिएको अड्डालाई चीन र पाकिस्तानले आ*क्रमण गर्नुअघि नै क्षे*प्यास्त्र प्र*हार गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसो गरियो भने चीनले भ*यंकर प्रतिकार गर्छ । यु*द्धको यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाललाई पनि नकारात्मक असर पर्नु स्वाभाविक छ । विशेषगरी भारतको उत्तरपूर्वमा रहेको असममा १० वटा अग्नि–तेस्रो क्षे*प्यास्त्रहरू राखिएका छन् । अनि त्यहीँ नै आठवटा अग्नि–दोस्रो क्षेप्या*स्त्र पनि छन् ।
चिकेन्स नेक कोरिडोरको संवेदनशीलतालाई बुझेर नै अनि चीनबाट हुनसक्ने सम्भावित ख*तरालाई मद्देनजर गरेर नै भारतले त्यसनजिकै यी क्षेप्यास्त्रहरू राखेको हो । अनि यु*द्धको स्थितिमा ती क्षेप्या*स्त्रहरू चीनको कुन ठाउँलाई लक्षित गरी प्र*हार गरिने हुन् थाहा हुँदैन र ती नेपालको आकाश भएर उडाइन पनि सक्छन् ।
मानौं युद्ध भएछ भने भारतले ती क्षेप्या*स्त्र प्रहार गर्दा अनि चीनले तिनलाई रोक्न खोज्दा तिनीहरू नेपालको आकाशमा वि*स्फोट हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यस्तो स्थिति आएमा नेपालका विभिन्न भागमा अकल्पनीय क्षति पुग्न सक्छ । त्यसैले आ*णविक शक्तिसम्पन्न दुई मुलुकबीच युद्ध नहोस् भन्ने कामना नेपालले गर्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन । त्यसो त भारत अहिलेको अवस्थामा चीनभन्दा कमजोर स्थितिमा रहेकाले युद्धका लागि उद्दत् देखिँदैन तर भविष्यमा उसले अत्याधुनिक हति*यार प्राप्त गरेमा उसको आत्मविश्वास बढेर यु*द्धका लागि तयार हुन सक्छ । त्यस यु*द्धले हिमालय क्षेत्रको भूराजनीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ । यो लेख विन्देश दहालले लोकान्तरमा लेख्नु भएको छ ।